15/06/2022 - 18:22:54 Wararka Gudaha Liibaan Jeexoow
Madaxweynaha Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa gabaldhicii maanta ku dhawaaqay Reysal Wasaaraha cusub ee dowladdiisa kaas oo loo magacaabay Xamse Cabdi Barre oo katirsanaa Xildhibaanada laga soo doorto maamulka 'Jubbaland'.
15/06/2022 - 17:00:09 Wararka Gudaha Liibaan Jeexoow
Jamaame oo ku tallaabsatay Horumar dhanka beeraha ah [Sawirro].
15/06/2022 - 13:45:31 Wararka Gudaha Liibaan Jeexoow
Idaacadda Islaamiga Al Furqaan ayaa sawirro kasoo qaaday beeraha degmada Jamaame ee gobolka Jubbada hoose.
15/06/2022 - 12:21:37 Wararka Gudaha Liibaan Jeexoow
Wararka ka imaanaya gobolka Gedo ee dhaca bartamaha dalka Soomaaliya ayaa sheegaya in markale diyaaradaha dagaalka Kenya ay duqeymo culus ka geysteen deegaanno dhowr ah.
15/06/2022 - 12:18:13 Wararka Gudaha Liibaan Jeexoow
Rag hubaysan ayaa xalay weerar culus ku qaaday guri uu magaalada Muqdisho ka deganaa mid kamida xildhibaannada baarlamaanka dowladda Federaalka.
15/06/2022 - 11:18:07 Wararka Gudaha Liibaan Jeexoow
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya shaqaaqo ka dhacday degmada Qardho ee gobolka Bari ee dalka Soomaaliya.
Dowladda Kenya oo safiir ka socday maamulka 'Somaliland' ka qeyb gelisay shir ka dhacay Nairobi.
15/06/2022 - 11:17:10 Wararka Gudaha Liibaan Jeexoow
Dowladda Kenya iyo maamulka 'Somaliland' ayaa ka hadlay shir shalay ka dhacay magaalada Nairobi ee dalka Kenya kaasi oo uu ka baxay safiirka DF-ka.
Hay'ad Samafal oo Isbitaalka Banaadir ku wareejisay qalab casri ah.
15/06/2022 - 10:29:01 Wararka Gudaha Liibaan Jeexoow
Hay'adda Hormuud Salaam Foundation ayaa Isbitaalka Hooyada & Dhallaanka ee Banaadir ugu deeqday 10 xabo oo sariiraha dhalada ah ee lagu koriyo carruurta aan billaha dhameysan.
Diimuqraadiyadda iyo Siyaasiyiinta Soomaaliyeed [WARBIXIN].
14/06/2022 - 23:30:03 Wararka Gudaha Liibaan Jeexoow
Dagaal ka dhacay duleedka Matabaan iyo Askari lagu dilay degmada Kaaraan.
14/06/2022 - 16:46:19 Wararka Gudaha Liibaan Jeexoow
Wararka ka imaanaya gobolka Hiiraan ee bartamaha dalka Soomaaliya ayaa sheegaya in iska hor'imaadyo xooggan ay ka dhaceen degmo kaabiga ku haysa gobolka Galguduud.
Abiy Axmed oo faah faahin dheeraad ah ka bixiyay howlgalkii Saraakiisha Amxaarada lagu raafay.
14/06/2022 - 16:45:31 Wararka Gudaha Liibaan Jeexoow
Mas'uulka ugu sarreeya dowladda Xabashida Itoobiya ayaa ku dhawaaqay in ay wadahadal lafurayaan kooxaha mucaaradka awoodda badan ee dagaalka ka wada waqooyiga wadankaasi.
14/06/2022 - 16:27:12 Wararka Gudaha Liibaan Jeexoow
Galbeedka qaaradda afrika ayaa qarka usaaran in uu ka hoos baxo heymanadii dowladda Faransiiska ee mudada sanadaha ah gummeysanaysay shucuubta ku dhaqan mandiqadda oo idil.
Iska hor imaadyo ka dhacay mid kamida gobollada dalka Itoobiya.
14/06/2022 - 12:09:33 Wararka Gudaha Liibaan Jeexoow
Dawladda Ismaamulka Gambeellaha ee Itoobiya ayaa sheegtay in saaka israsaasayn culusi dhex martey ciidanka dawladda iyo maleeshiyaad hubaysan kaas oo ka dhacey caasimadda Gambeellaha wuxuuna dagaalku bilaawday 6:30 aroornimo.
Joe Biden oo booqasho ku mari doona mandiqadda Bariga dhexe.
14/06/2022 - 10:51:35 Wararka Gudaha Liibaan Jeexoow
Madaxweynaha Mareykanka Biden ayaa la sheegay in uu booqasho ku tegi doono dalal ku yaalla bariga dhexe oo uu ugu horreyo maamulka isugu yeedha Israa'iil.
Qarax gaari gaashaaman ATMIS looga gubay oo ka dhacay Ceelwareegoow.
14/06/2022 - 10:33:24 Wararka Gudaha Liibaan Jeexoow
Khasaara dhimasho iyo dhaawac leh ayaa ka dhashay qarax xooggan oo ciidamo katirsan ATMIS lagula beegsaday deegaan katirsan Sh/hoose.
Weeraro toos ah oo lagu qaaday saldhigyo kuyaal magaalada Muqdisho.
14/06/2022 - 09:09:43 Wararka Gudaha Liibaan Jeexoow
Xoogag hubaysan ayaa xalay weeraro culus ka fuliyay qaar kamid ah degmooyinka gobolka Banaadir xilli ammaanka caasimadda si aad ah loo adkeeyay.
13/06/2022 - 18:08:37 Wararka Gudaha Liibaan Jeexoow
13/06/2022 - 12:39:16 Wararka Gudaha Liibaan Jeexoow
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya dilal saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay magaalada Muqdisho iyo deegaan katirsan gobolka Sh/dhexe.
Saldhigyo ay ku sugnaayeen ciidamada Kenya iyo kuwa Uganda oo lagu weeraray Soomaaliya.
13/06/2022 - 10:08:02 Wararka Gudaha Liibaan Jeexoow
Wararka ka imaanaya Koonfurta Soomaaliya ayaa sheegaya in saacadihii lasoo dhaafay weeraro lagu miray saldhigyo ay ku sugnaayeen ciidamada shisheeye iyo maleeshiyaadka dowladda.
Xasan Gurguurte oo xildhibaannada ka codsaday in ay ansixiyaan R/wasaaraha uu soo magacaabi doono.
13/06/2022 - 09:59:09 Wararka Gudaha Liibaan Jeexoow
Isagoo xarunta madaxtooyada kula hadlayay xildhibaanno katirsan baarlamaanka cusub ayuu sheegay in dhowaan uu soo magacaabi doono R/wasaare.